कसले किन्दियो प्रियंकालाई ३३ लाखको कार…(हेर्नुस् भिडियो)
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सबैभन्दा ब्यस्त अनि सर्वाधिक आम्दानी गर्ने गर्ने नायिका प्रियंका कार्कीले टाटाको जेस्ट कार चढ्ने निर्णय गरेकी छिन् । नायिका कार्कीले भारतको सुप्रसिद्ध अटोमोबाइल कम्पनी टाटा मोटर्स्द्वारा उत्पादित जेस्ट कार किनेको कुरा आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी दिएकी हुन् । आकर्षक लुक, उत्कृष्ट पर्फमेन्स र स्टाइलका कारण टाटा जेस्टले
दुई दिन पहिले रिलिज चलचित्र”ग्याङ्गस्टर ब्लूज’ को टिजरले युट्युवमा लोकप्रियता बढाउँदै लगेको छ । रिलिजको केहि घण्टामै युट्युवको नेपाल ट्रेण्डिङमा ‘टप टेन’मा स्थान जमाएको टिजर यो समाचार तयार पार्दासम्म तेश्रो नम्बरमा रहँदा यसको वार वलिउड सुपरस्टार सलमान खानको ‘ट्युवलाईट’ टिजरसँर परेको छ । सँगसँगै जस्तो रिलिज भएका यी दुई फिल्मका
बाबुलाई गोप्य कुरा लुकाउन श्रद्धाले यस्तो भाषा प्रयोग गर्छिन्
नायिका श्रद्धा कपुर दर्शकको विचमा लोकप्रिय नायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् । उनलाई आफ्नो प्रेम प्रसंगको खबर सुन्दा रमाइलो लाग्छ । पछिल्लो समय निर्देशक फरहान अख्तरसँग उनको प्रेम प्रसंग रहेको समाचार मसला बन्यो । श्रद्धा भन्छिन्-‘मलाई थाह छैन यस्तो मनगढन्ते समाचार कहाँबाट आयो ।’ त्यसो त उनलाई यस्ता खबर सुन्दा रमाइलो लाग्छ
वान सटमा”जालो”, हेर्नुस् मन छुने डकुमेन्ट्री….(भिडियो सहित)
वान सटमा कसरी पूरा फिल्म खिचियो होला ? हो, वान सटमा खिचिएको फिल्म ‘जालो’ खिच्दाको दुःख, कष्ट र खुसी समेटिएको खिच्दाको डकुमेन्ट्री सार्वजनिक भएको छ । एक घरमा दर्जन बढी कलाकार तथा प्राविधिक माझ खिचिएको यो फिल्म जेठ १९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसका कलाकार तथा प्राविधिक के भन्छन् त
लामो समयदेखि मलाइका अरोरा र अर्जुन कपुरको रोमान्सको चर्चा एकदम छ । अर्जुन कपुरकै कारण मलाइकाको अरवाज खानसँग सम्वन्ध टुटेको बताइन्छ । अन्ततः यस विषयमा पहिलोपटक मलाइकाले मुख खोलेकी छिन् । हालै मलाइका नायिका बिपाशा बासु र ऋतिक रोशनकी पूर्वपत्नी सुजैन खानसँग एउटा पार्टीमा पुगेकी थिइन् । त्यहाँ एक रिपोर्टले
यस कारणले नआउने भयो “बाहुबली ३”
“‘बाहुबली २” को अपार असफलतासँगै बाहुबली तीन पनि आउने खबर भाइरल हुन थालेको छ। भर्खरै हलमा लागेको बाहुबली २ ले एक सातामा १००० करोड कमाइ गरिसकेको छ। यहि समयमा बाहुबलीका लेखक र निर्देशक एसएस रामौलीले पार्ट तीन आउनेमा कुनै कुरा नभएको बताएका छन् । बाहुबलीको कहानी अब सकिएको छ ।
बहिनीलाई उपमेयर सघाउन भारतबाट आइन् विपना थापा..,शाही परिवारबाट धम्की विपनालाई
अरु बेला माइती देश आउन चाडबाड र पारिवारिक जमघट पर्खिनुपर्थ्यो । तर यसपटक निर्वाचनले नायिका विपना थापालाई भारतको मथुराबाट नेपाल तानेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । विपना शनिबार नारायण नगरपालिकामा कांग्रेसका पक्षमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा देखिइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो परिवार नै राजनीतिक हो । म
धुर्मुस सुन्तलीद्धारा चौथो परियोजना निर्माणको घोषणा…,धुर्मुस–सुन्तलीको चौथो परियोजना यस्तो
धुर्मुस–सुन्तलीले चौथो परियोजना निर्माणको घोषणा गरेका छन् । महाभुकम्पपछि लगातार सामाजिक कार्यमा सक्रिय धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले जापानबाट चौथो परियोजना निर्माणको घोषणा गरेका हुन् । तीनवटा बस्ती बसाइसकेका यी जोडीले चौथो परियोजनाको रुपमा पुरै नेपाल देखिने पर्यटकीय स्थल बनाउने घोषणा गरेका हुन् । जापानमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै धुर्मुसले कुन ठाउँमा